Motors Geared | Shiinaha Gear Motor | Iibinta Qalabka Gear ee Shiinaha | Soo saaraha soo-dejinta alaabada Shiinaha
Mashiinka Geerka leh | Shiinaha Gear Motor | Iibinta Qalabka Gear ee Shiinaha | Shiinaha soo saaraha soo-dejinta alaabada Shiinaha
Mootooyinka korontada korontada ku shaqeeya waxaa loo adeegsadaa codsiyada u baahan dhalidda sare iyo xawaaraha wareegga usheeda dhexe ee soo saaridda hoose, inta badan meelaha iyo xoogga la heli karo ay xaddidan yihiin. Tani waxay muujineysaa baaxad ballaaran oo ah barnaamijyada aasaasiga ah ee loo maro shirkadaha kala duwan. Laga soo bilaabo masaxa gawaarida iyo matoorrada daaqada ilaa sariiraha kiliinikada degdega ah iyo wiishashka bukaan socodka, aaladaha gawaarida qaabdhismeedyada, maamulayaasha albaabka laga soo galo ee barnaamijka laga dhigo ilaa kuwa isku dhafka ah ee isku dhafka ah, matoorrada gawaarida ayaa aasaas u ah soo bandhigida guud ee qalabka oo aan si joogto ah ugu tiirsan nahay
Waa Maxay Qalabka Gear?
Mashiinka gawaarida waa matoor koronto oo lagu daro tareenka gawaarida. Mootooyinka Gearku waxay adeegsadaan midkood AC (alternating current) ama awooda DC (Direct Current). Guud ahaan, goy-yareynta ayaa loo soo jeediyay in la nuqulo awooda wax soo saar ee la heli karo iyada oo aan la balaadhin doonin isticmaalka mootada iyadoo la ilaalinayo cabirka muxaafidka ah. Isku-tanaasulka isku dhafka xoogga waa hoos u dhac ku yimaada xawaaraha waxsoosaarka wax soo saarka iyo hoos u dhaca aqoonta guud. Iyadoo la adeegsanayo ikhtiraaca ugu wanaagsan ee suurtagalka ah iyo saamiga loogu talagalay codsiyada cad, soosaarka ugu habboon iyo astaamaha xawaaraha waxaa lagu heli karaa iyada oo la raacayo farsamooyinka saxda ah ee saxda ah si loo furo qiyaasta ugu wanaagsan ee qalabkaaga OEM.
Waa maxay codsiyada AAN ISTICMAALAYn Qalabka Gear Motors?
La qabsiga iyo ka faa'iideysiga fog ee matoorrada korantada dartiis, waa dadaal la'aan in la baaro codsiyada AAN ISKU adeegsan. Codsi kasta oo u baahan xawaare sare usheeda dhexe iyo xoog guud ahaan hooseeya kama faa'iideysan doono ka faa'iideysiga matoorka qalabka. Tani waxay kujirtaa inta badan taageerayaasha, siphons, iyo baaritaanka codsiyada. Xaaladahan oo kale, xawaaraha udub dhexaadka mootada ayaa ah qodobka ugu muhiimsan. Codsiyada u baahan wax ku oolnimada aadka u daran, fudeydka wadista gadaal, jahwareer yar oo la garan karo, ama xawaare gaar ah oo sax ah ama xakameyn xoog ah ayaa laga yaabaa inay ka faa'iideystaan ​​isku-dabarid baabuur.
La xiriir Shirkadda XinLan Corporation Macluumaadka Gawaarida Gaarka ah
Shirkadda XinLan, annaga qalabka wax soo saarka Shiinaha iyo khubarada mootada ayaa halkaan u jooga inay kaa caawiyaan fahamka xulashadaada gudbinta awooda. Iyadoo aan loo eegin inaad u baahan tahay matoor sax ah si aad ula jaanqaado tareenka aad hadda wax ka barato ama aad u baahato caawimaad ku saabsan samaynta mootada marsho ee ugu habboon ee codsiyada, sida qalabka samaynta barafka, cuntada, qalabka cabitaanka kulul / qabow, ama qalabka daryeelka qalabka, kaa caawin kara. Kala xiriir shaqsi ka tirsan kooxdeena ganacsiga taleefanka ah 008657188221556 ama nala soo xiriir websaydhka.
1. Sideed u xisaabisaa xuddunta mootada marshada?
Haddii aadan rabin tirinta ilkaha, ka cabir dhexroor walboo geesaha ka soo gala bartamaha illaa barta xiriirka ka dhexeeya geerka. U qaybi dhexroorka qalabka wax soo saarka dhexroor qalabka maaddada la geliyo. Ku dhufo miisaanka mootada saamiga qalabka si aad uhesho miisaanka wax soo saarka.
2. Waa maxay DC Gear Motor?
Mashiinka gawaarida waa isku-darka hal-isku-dhafka mootada iyo sanduuqa. Ku darista madaxa qalabka korontada mootada ayaa yareyneysa xawaaraha iyadoo la kordhinayo soosaarka miisaanka
3. Maxay yihiin barnaamijyada waaweyn ee xawaaraha yareeya?
Xawaare yareeyayaasha waxaa loo adeegsadaa inay ku shaqeeyaan dhammaan mashiinnada warshadaha iyo guryaha, kuwaas oo u baahan in la yareeyo xawaaraha matoorka korantada si badbaado leh oo hufan. Xawaare yareeyayaasha waxay hagaajinayaan xawaaraha mootada si ay u siiyaan miisaanka loo baahan yahay mashiin si uu si sax ah ugu shaqeeyo
Gawaarida jiqda waa ilo wade oo gacan ka geysta keydinta tamarta waxayna waxtar u leeyihiin warshado badan oo kala duwan.
Mootooyinkani waxay u hoggaansamaan heerka IE3 ee heerka caalamiga ah IEC60034-30 (0.75kW ama ka badan).
Waxaan hubinay iswaafajinta alaabada caadiga ah adoo kudhaqaaqaya adoo adeegsanaya teknoolojiyada waxtarka sare.
Mashiinnada qalabka korontada ku shaqeeya waa taxane adeegyo aan dareeme lahayn oo qaata matoorka magnet, iyo matoorradani waxay ku darsadaan waxtar dheeri ah tamarta.
Gawaarida gawaarida, Gawaarida Gear, Shiinaha Gear Motor, iibinta gawaarida gawaarida ee Shiinaha, Shirkadaha Gear Motor Shiinaha, soosaarida qalabka warshadaha Shiinaha, Gawaarida gawaarida gawaarida ee Shiinaha, Shiinaha soo saaraha gawaarida Shiinaha